Sida loo iftiimiyo qoraalka ku jira PDF xafidan | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida qoraalka loogu muujiyo PDF-ga xafidan
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa wax ku barta internetka, waxaad ogtahay in mid ka mid ah qalabka aad haysato uu yahay PDF. Si kastaba ha ahaatee, macalimiin badani waxay jecel yihiin inay ilaaliyaan dukumeentiyadooda si aan qoraalladooda loo koobin ama aan loo xadisin. Taasina waxay sababtaa inaan la xariiqin karin inaad daabacdo mooyaane. Mise waxay noqon kartaa? Anaga Waxaan ognahay sida qoraalka loogu muujiyo PDF-ga xafidan.
Oo mar haddii aanu doonayno inaad adiguna ogaato, oo aad haysato qalabkii saxda ahaa ee aad kula shaqayn lahayd, waxaanu ka hadlaynaa xalalka suurtogalka ah ee aad ku gaadhi karto. U tag?
1 Waa maxay sababta PDF-ga loo ilaaliyo?
2 Waa maxay sababta qoraalka loogu iftiimiyay PDF
3 Sida loo iftiimiyo qoraalka pdf xafidan
3.2 Qalabka internetka
3.3 Laga soo bilaabo PDF la ilaaliyo ilaa PDF la tafatirin karo
Waa maxay sababta PDF-ga loo ilaaliyo?
Bal qiyaas in aad samaysay qoraal ama dukumeenti muhiim ah, hal-abuur leh, hal-abuur leh. Dhibaataduna waxay tahay in aad u dirto dad badan, haddii ay yihiin kuwo aad isku heer ah (professors, researchers...) ama mid kale (madaxda, ardayda ...). Waxa ugu dambeeya ee aad rabto waa in fikradahaaga la koobiyeeyo. Oo, hadday sameeyaan, yaanay run ahaan noqon.
Aad u tiro badan Waxay go'aansadeen inay u soo diraan ilaalin si ay uga hortagaan dadka inay koobiyeeyaan. Markaa shaqo kama heli kartid qoraalladaada ama wax la mid ah.
Dhab ahaantii, ilaalinta PDF-ga waa shay wanaagsan, laakiin kaama xoraynayso dhibaatooyinkan midkoodna, maadaama ay jiraan qalab ka gudbi kara xannibaadda, oo sidaas darteed u hela dukumeenti si buuxda loo tafatiran karo. Laakiin waa run in ay siisaa in yar oo ammaan ah kuwa iyaga la shaqeeya.
Waa maxay sababta qoraalka loogu iftiimiyay PDF
Sababta aad u rabto inaad u iftiimiso qoraallada way kala duwan tahay. Waxaa laga yaabaa inaad illowday inaad muujiso qayb ka mid ah dukumeentiga oo aadan gacanta ku haynin asalka, ama barnaamijka aad ku abuurtay.
Ama waxaa laga yaabaa inaad tahay arday oo aad rabto inaad muujiso qaybo ka mid ah qoraallada aad wax ku baranayso.
Si kastaba ha noqotee, iftiiminta, ama hoosta ka xarriiqda, ayaa loo adeegsadaa in lagu muujiyo qayb ka mid ah dukumeentiga. Waxaan dhihi karnaa waa qaab soo koobid, mar haddii aad tilmaanto qaybaha ugu muhiimsan ama kuwa ay tahay inaad si fiican u xasuusato.
Si tan loo sameeyo, dukumiintiyo badan, sida doc, docx, txt... ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud u sameyso. Sidoo kale PDF la tafatiran karo. Laakiin ka waran mid la ilaaliyo?
Inkasta oo ay u baahan tahay dadaal yar si loo gaaro, sidoo kale waa la samayn karaa. Oo waxaan ku sharaxay sida hoos ku qoran.
Sida loo iftiimiyo qoraalka pdf xafidan
Si aad u awooddo inaad ku muujiso qoraalka PDF-ga la ilaaliyo, waxa ugu horreeya ee maskaxda lagu hayo waa inaad u baahan tahay inaad ilaaliso., taas oo ah, waa inay noqotaa PDF si buuxda loo tafatiran karo si aad ula shaqeyso.
Waxaad tan ku gaadhay siyaabo badan, laakiin ku dhawaad ​​dhamaantood waxay ku lug yeelan doontaa isticmaalka qalab.
Adobe Acrobat waa barnaamijka "rasmiga ah" ee loogu talagalay PDFs waana midka kuu ogolaanaya inaad tafatirto faylasha PDF sida ugu fudud uguna dhaqsiyaha badan.
Waa inaad xisaabta ku dartaa, sida uu dhigayo caadada. haddii aadan ahayn qoraaga ama abuuraha dukumeentiga, waa inaadan awoodin inaad tafatirto, laakiin waa inaad la xiriirtaa qofkaas si aad u hesho.
Sidoo kale, PDF-ga la ilaaliyo waxa lagu ilaalin karaa laba siyaabood oo kala duwan:
Sirta ah, kaas oo laga saari karo. Sidee? Tagitaanka Qalabka/Ilaalinta/Sirta/Saarka Amniga. Marar badan waxay ku waydiin doontaa erayga sirta ah ee aad lahayd si aad meesha uga saarto.
Siyaasadda amniga ku salaysan ee server-ka, halkaasoo uu yahay qoraaga laftiisa, ama maamulaha server-ka, kaas oo bedeli kara.
Kahor intaanan ku siin qaar ka mid ah tusaalooyinka boggaga internetka ee kaa caawinaya inaad furto PDF-yada, waa inaan samayno laba caddayn:
Dhinaca kale, in Waxaan ka hadlaynaa qalab dhinac saddexaad ah, taas oo macnaheedu yahay inaad ku shubayso dukumeentiga server-ka kaas oo aadan hadda gacanta ku hayn.. Haddii ay aad muhiim u tahay, kuma talineyno (oo waxaa fiican inaad isku daydo qalabka aad ku rakibto kombuyuutarkaaga). Waa maxay sababtu? Hagaag, sababtoo ah ma garanaysid waxa ku dhici kara dukumeentigaas. Haddii aadan ku kalsoonayn bogga, oo aad ogtahay inay tirtiraan marka aad joojiso la shaqayntiisa, waa inaadan samayn.
Dhinaca kale, Qalabku had iyo jeer ma maamulaan inay furaan dukumeentiga. Mar way sameeyaan marna ma sameeyaan. Xitaa haddii ay sameeyaan, waxay ku dhamaan karaan calaamadaynta qoraalka, markaa taas maskaxda ku hay.
Markaan waxan oo dhan dhahnay, agabyada aan ku talin karno waxaa ka mid ah:
Ku dhawaad ​​dhamaantood isku si bay u shaqeeyaan: waa inaad gelisaa dukumeentiga, gelisaa furaha sirta ah (boggagga qaar) oo sug inta faylka la tafatiran karo lagu soo celinayo. Kuwo kale uma baahna inaad isticmaasho erayga sirta ah, waxay isku dayaan inay furaan la'aanteed (haddii aan si weyn loo qarin).
Laga soo bilaabo PDF la ilaaliyo ilaa PDF la tafatirin karo
Marka aad haysato iyada oo aan la ilaalin, tallaabada xigta waxay noqon doontaa inaad wax ka beddesho. Taasna waxa aad haysataa doorashooyin (maxaa yeelay mar walba ma awoodid in aad PDF-ga ku saxdo barnaamij). Tusaale ahaan:
Gees Haddii aad isticmaasho Windows 10 ama 11 waa ikhtiyaar. Kaliya waa inaad ku furto pdf browserkaas oo dooro qoraalka si aad u iftiimiso. Isla markaad sameyso, menu-hoosaad ayaa kuu soo bixi doona kaasoo kuu ogolaanaya inaad hoosta ka xariiqdo midabyo.
Adobe Acrobat. Waxay noqon doontaa barnaamijka ugu fiican in la beddelo qoraalka, hoosta laga xarriiqo, la dhigo sawirrada... si kale haddii loo dhigo, si loo saxo pdf oo dhan. Si tan loo sameeyo, kaliya waa inaad furto faylka Acrobat DC, ku dhufo "Edit PDF" qalabka ku yaal guddiga saxda ah oo isticmaal qalabka aad haysato. Marka la dhammeeyo, waad kaydinaysaa waana taas.
Awood PDF. Waa software ku rakiban kumbuyuutarka oo wax ka beddela qoraallada, sawirrada, calaamadaha biyaha, xitaa waxaad bedeli kartaa nidaamka boggaga. Dabcan, nooca bilaashka ah aad ayuu u xaddidan yahay oo haddii aad rabto inaad wax badan sameyso waa inaad tagtaa midkii lacag bixinta.
LibreOffice. Waa tafatire dukumeenti ah (erey, excel...) laakiin sidoo kale waxaad wax ka beddeli kartaa PDFs. Intooda badan way furaan waxayna kuu oggolaanayaan inaad wax ka beddesho sidii adigoo la shaqaynaya dukumeenti.
PDF2go. Haddii aadan rabin inaad wax ku rakibto kumbuyuutarkaaga, kani waa tifaftire PDF online ah halkaas oo aad si fudud u iftiimin karto qoraalka. Waxa kale oo aad haysataa doorashooyin kale.
Foxit PDF Reader & Editor. Ku habboon haddii waxa aad rabto ay tahay inaad ku muujiso qoraalka PDF laakiin ka soo baxa mobilkaaga. Waxa kaliya ee loogu talagalay iOS laakiin waxa ugu fiican ayaa jira. Waxay ku leedahay taageero dhowr luqadood oo sidoo kale waa lacag la'aan.
Akhristaha iyo tifaftiraha PDF. Doorashada Android (inkasta oo ay sidoo kale ku jirto iOS). Hagaag, hoosta ka xarriiq, wax ka beddel, saxeex...
Waxaa jira xulashooyin badan oo badan laakiin kuwan waxaad mar hore awood u yeelan doontaa inaad ku muujiso qoraalka PDF la ilaaliyo. Ma haysaa talooyin kale? Waanu furannahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sida qoraalka loogu muujiyo PDF-ga xafidan
Barnaamijyada sawirada loogu beddelo sawirro